देशैभर कांग्रेस महाधिवेशनको चटारो, तर सुनसान छ कोइराला निवास
फरकधार / २ असोज, २०७८
नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनको रौनक सबैतिर छ । नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले गाँउ नगरमा सरगर्मी बढ्दो छ । धेरैजसो जिल्लाका वडा अधिबेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । केहीको बाँकी छन् र गर्ने तयारी भइरहेको छ । नगरको अधिवेशन असोज ९ गतेलाई तोकिएको छ ।
वडादेखि केन्द्रसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्रै चलेको छैन कांग्रेसलाई कस्तो बनाउने भन्ने नीतिगत बहस समेत भइरहेको छ ।
कांगेस नेता तथा कार्यकर्ताहरुको महाकुम्भ सुरु भइरहँदा नेपाली कांग्रेसको उत्पतीको थलोको रुपमा हेरिने विराटनगरको कोइराला निवास भने सुनसान छ । कुनैबेला कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरुले तीर्थस्थलको रुपमा मान्ने कोइराला निवासमा अहिले नगर गाउँ अधिवेशनको चहल पहलको आभाससमेत हुन पाएको छैन ।
कुनै बेला मुलुककै शक्ति केन्द्रको रुपमा परिचित कोइराला निवासबाट आन्दोलन र परिवर्तनको नेतृत्व भएको थियो । २००७ साल, २०३६ साल र २०६२–६३ को आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गरेको कोइराला निवासमा कांग्रेस महाधिबेसन लागेको संकेत समेत पाइँदैन ।
राणाविरोधी आन्दोलनको जग बसालेका पिताजी (कृष्णप्रसाद कोइरालालाई सबैैले पिताजी भन्ने गरेका)का कारण मात्रै होइन, बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाको निवास पनि भएका कारण यस घरसँग कांग्रेसको खास सम्बन्ध देखिन्छ ।
तर, कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनको महत्वपूर्ण यस घडीमा कोइराला निवास हेरालुको जिम्मामा छ । यहाँ न पार्टीका कार्यकर्ता पुगेका छन् न त नेताहरु नै । कोइराला परिवारका सदस्यले कोइराला निवास नटेकेकै महिनौँ बितेको छ ।
कोइराला निवासमा अहिले नियमित कामबाहेक अरु केही भएको छैन । गाई र गोठको हेरचाह, सरसफाइ, करेसाबारीको रेखदेखमै सीमित छ, कोइराला निवास ।
निवासमा हेरालुको रुपमा सानै उमेरदेखि बसेका लक्ष्मी सुवेदी र पाना उराँवको परिवार छ । कोइराला निवासको सुरक्षामा खटिएका महानगरका चारजना रक्षक पनि निवासमा नियमित रुपमा जान्छन् ।
डा. शेखर कोइराला र हिमांशु कोइराला अहिले कोइराला निवासका मालिक हुन् । दाजुभाइका बीचमा अंशबण्डा हुँदा शेखर कोइराला र निरुदा (निरञ्जन कोइराला)को भागमा मूल निवास परेको छ ।
निरुदाको मृत्यु भएको र उनका छोरा हिमांशु दिल्लीमा बस्ने गरेकाले घरको संरक्षण डा. शेखरकै जिम्मामा छ । हिमांशुको आउजाउ पातलो छ ।
महाधिवेशनमा सभापतिको दाबेदारी गरिरहेका डा. शेखर कोइरालासमेत एक महिनायता निवासमा पुगेका छैनन् । कोइराला निवासको रेखदेखमा रहेकी लक्ष्मी सुवेदीले एक महिनायता डा. शेखर कोइराला निवासमा नआएको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेश १ मा आएका बेला डा. शेखर निवासमै बस्ने गरेका छन् ।
लक्ष्मीले भनिन्,‘शेखरदा एक महिनायता प्रदेश १ मै आउनुभएको छैन, त्यही भएर निवास पनि आउनुभएको छैन ।’ डा. शेखर नआँउदा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तासमेत निवासमा आएका छैनन् । सुवेदीले थपिन् ‘कोइराला परिवारका सदस्य नै नभएका कारण चहलपहल नभएको हो ।’
कोइराला परिवारका सदस्य आए भने चहल पहल हुने उनीहको विश्वास छ । लक्ष्मीका अनुसार डा. शेखर कोइराला आएको बेला बैठक भेटघाट भइरहन्छ । बिहानैदेखि मानिसहरुको चहलपहल हुन्छ । रातिसम्म पनि मानिसहरु आउने–जाने गरिरहन्छन् ।
डा. शेखरको परिवार काठमाडौंमा बसेका कारण कोइरालानिवासमा रौनक हराएको हो । त्यसो त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भएपछि नै कोइराला निवासको रौनक हराएको ठान्छिन्, लक्ष्मी ।
‘सान्दाइ (गिरिजाप्रसाद कोइराला) स्वर्गीय भएपछि नै चहलपहल कम हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलेजस्तो त कहाँ छ र ?’ कोइराला निवासको रौनक फर्काउन डा. शेखर कोइराला लाग्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनले सुनाइन्, ‘कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि दुःख गर्दै हुनुहुन्छ ।’
१२ वर्षको उमेरदेखि कोइराला परिवारको चहल पहल हेर्दै हुर्केकी हुन्, लक्ष्मी । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, कोइराला निवास र कोइराला परिवारको भूमिका नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएकी छन्, लक्ष्मीले ।
यस्तो छ कोइराला निवास
विराटनगरको कोसी अस्पतालको विपरीत पश्चिमपट्टि कोइराला निवास छ । कोइराला निवास निर्माण भएको एक सय वर्षभन्दा बढी भएको छ । कृष्णप्रसाद कोइरालाले यो घर बनाएका हुन् ।
काठ, बाँस, माटो र टिनको छानोबाट बनेको यो घर अहिले पनि पुरानै हालतमा संरक्षणको प्रयास गरिएको छ । उत्तरतिर भने पुरानो घरसँगै जोडेर पक्की दुई तल्ले घर पछि बनाइएको हो ।
यही घरको पहिलो तल्लामा गिरिजाप्रसाद कोइराला सुत्ने गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सुत्ने कोठा, उनले प्रयोग गरेका सामन अहिले पनि जस्ताको जस्तै छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला सुत्ने कोठामा दुईवटा पलङ छन् । तीमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला सुत्ने सानो पलङमा कोही पनि सुत्दैनन् ।
निवास आएका बेला कहिलेकाहीँ दिउँसोमा डा. शेखरले अर्को पलङमा आराम गर्ने गरेको लक्ष्मी बताउँछिन् ।
डा. शेखरकी आमा नोना कोइरालाले पक्की घर बनाएको लक्ष्मी सम्झन्छिन् । उनले थपिन्, ‘यो घर बनाएको पनि जुग भइसकेको छ ।’
गिरिजाप्रसाद सुत्ने कोठासँगै बैठक कोठा छ । बैठक कोठामा गिरिजाप्रसादले प्रयोग गर्ने सर–सामान छ । कोही हेर्न र अवलोकन गर्न आए संग्रहालयको रुपमा देखाउने गरिएको छ । तर, फोटो खिच्न मनाही छ ।
बैठक कोठाअगाडि बार्दली छ । यही बार्दलीमा बसेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले औपचारिक बैठक र पत्रकारसँग कुराकानी गर्ने गरेका थिए ।
गोप्य गर्नुपरेमा बैठक कोठाको प्रयोग गरिने गरेको थियो । बार्दलीमा अहिले पनि पुराना काठका कुर्सीहरु नै राखिएका छन् ।
कृष्णप्रसाद कोइरालाले सय वर्षभन्दा अघि बनाएको काठको घर, टिनको छानो र बाँसका भित्तामा माटो लेपन गरिएकाले पुरानो घरलाई जोगाउन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको छ ।
धमिराबाट जोगाउन घरलाई हरेक दुई वर्षमा मर्मतसम्हार गर्दै आइएको छ । भुइँतल्लामा सिमेन्ट प्रयोग गरेर ढलान गरिएको छ । माथिल्लो तल्लामा अहिले पनि माटो नै छ । जुन घरले परिवर्तनका बाटो देखायो, राणाविरोधी आन्दोलनको सुुरुवात गर्यो, अहिले परिवर्तनपछि घर सुनसान छ ।
कृष्णप्रसाद कोइरालाले फाटेको भोटो यही घरबाट प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पठाएका थिए । फाटेको भोटो प्रतीकात्मक रुपमा पठाएर भोका नांगाहरुको पक्षमा राणा शासन नभएको कृष्णप्रसाद सन्देश थियो ।
कृष्णप्रसादले बनाएको यही घर अर्थात् कोइराला निवासले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीको बाटो डोहोर्याएको मान्छन्, धेरै ।
बिपीले सात सालको क्रान्ति यही घरबाट सम्पन्न गरे भने २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनमा बिपी यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए ।
यही घरमा बसेर निर्वाचन लडेका बिपी निर्वाचन जित्दै मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । ०३७ को जनमत संग्रहमा पनि कोइराला निवासबाट नै योजना बनेका थिए ।
जनआन्दोलन २०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–६३ मा पनि कोइराला निवासको योगदान नेतृत्वदायी थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला काठमाडौंमा तनाव भएपछि विराटनगरस्थित कोइराला निवास नै आउने गर्थे । उनले महत्वपूर्ण घोषणा कोइराला निवासबाट गर्ने गर्थे ।
अधिकांश जग्गा बिक्री
कोइराला निवासको जग्गा कोइराला परिवारका सदस्यहरुले बिक्री वितरण गरेका छन् । कोइराला निवासको जग्गा मातृका, बिपी, केशव, तारिणी र गिरिजाले आठ कठ्ठाका दरले पाएका थिए ।
तीमध्ये केशव र गिरिजाको भागमा परेको जग्गा मात्रै अहिले कोइराला परिवारको स्वमित्वमा छ । विराटनगरको मुटुमा रहेको अन्य जग्गामा ठूला–ठूला घर र व्यापारीक प्रतिष्ठान बनेका छन् ।
बिपीका छोराहरु प्रकाश, शशांक र श्रीहर्षले बिपीबाट उनीहरुमा सरेको जग्गाको स्वमित्व बिक्री वितरण गरेका छन् । मातृकाको भागमा परेको कोइराला निवासको जग्गा अहिले एक टुक्रा पनि कोइराला परिवारको नाममा छैन ।
मातृकाका विमल, कमल, विजु, अजु र सञ्जय गरी पाँच भाइ छोरा भए । उनका सुनिता र कविता दुई छोरी छन् ।
साहिँला केशवका शेखर र निरञ्जन दुई छोरा र एक छोरी चेतना छन् । उनीहरुले कोइराला निवासको जग्गा बेचेका छैनन् ।
तारिणीका छोरा ज्योतिले पनि धेरैजसो जग्गा बेचेका छन् भने अलिकति मात्रै उनको स्वामित्वमा रहेको कोइराला निवाससँग जानकारहरु बताउँछन् ।
गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजाताले भने जग्गा बेचेकी छैनन् । उनले कोइराला निवासको ४ कठ्ठा जग्गा जिपी कोइराला फाउन्डेसनलाई दिएकी छन् । फाउन्डेसनको नाममा घर बनिसकेको छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला संग्रहालय पनि निवाससँगै बन्दै गरेको जिपी कोइराला फाउन्डेसन मोरङका सभापति कौशल निरौलाले बताए ।
जग्गा बेचिएकोमा भावुक हुन्थे गिरिजा
नेपाली राजनीतिमा नोना कोइरालाको परिचय कोइराला परिवारसँग मात्रै जोडिँदैन । उनी सक्रिय राजनीतिमा थिइन् । तर, राजनीतिमा लागेका परिवारको व्यवस्थापन गर्न घर चलाउने जिम्मा नोनाकै थियो ।
पुरुषहरु सबै राजनतिमा लागेका र पटक–पटक सत्ताले दुस्मन ठानेका कारण कोइराला निवासको व्यवस्थापन नोना कोइरालाको काँधमा थियो ।
पिताजीकी साहिँली बुहारी नोनालाई त्यसैले सबैले ‘नोना आमा’ भनेर चिन्छन् । कोइराला निवाससँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका विराटनगरका मेयर भीम पराजुली कोइराला परिवारलाई राजनीतिको यो उचाँइमा पुर्याउन नोना आमाको योगदान अविस्मरणीय रहेको सम्झन्छन् ।
उनै नोना कोइरालाले निवासको जग्गा नबेच्न र राष्ट्रियकरण गरेर निवासलाई संग्रहालय बनाउनुपर्ने आग्रह गरेकी थिइन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा नोनाले गरेको आग्रहलाई कसैले वास्ता गरेनन् । २०६३ माघमा नोनाको निधन भयो । यसपछि कोइराला निवासलाई राष्ट्रिय संग्रहालय बनाउने योजनामा कोही लागेन ।
तर, नोनाको भावनाविपरीत कोइराला परिवारका सदस्यले आ–आफ्नो भागको जग्गा बेचे । कांग्रेस कार्यकर्ताले जग्गा बेचेकोमा विरोध गरे । तर, जग्गा बेच्ने निर्णय फिर्ता भएन । यसपछि २०६६ सालको दशैँमा विराटनगर आएका बेला तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताले निवासको जमिन बिक्री र निवासको अस्तित्वका बारेमा धेरै प्रश्न उठाएका थिए ।
कार्यकर्ताको भावना देखेर गिरिजा पनि भावुक हुँदै भनेका थिए, ‘अब म फर्केर विराटनगर आउँदिनँ । खोटो कोइराला निवास हेर्न सक्दिनँ ।’
यति बोलेर सोझै विमानस्थल पुगेका कोइराला साँच्चै विराटनगर फर्किएनन्, उनको निधन त्यही सालको चैतमा काठमाडौंमा भयो।
पिताजीका नाति–नातीना अहिले कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छन् । बिपी पुत्र डा. शशांक कोइराला कांग्रेस महामन्त्री छन् । उनी यसपटकको अधिवेशनमा सभापतिको दाबेदारी गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, साहिँला केशवका पुत्र शेखर कोइराला पनि यसपटकको अधिवेशनमा सभापतिको दौडमा छन् ।
गिरिजापुत्री सुजाता कोइराला पनि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छिन् । यसैगरी बिपी पुत्र प्रकाश कोइराला पनि राजनीतिमै छन् । प्रकाशका छोरा सिद्धार्थ पनि कांग्रेसको राजनीतिमा छन् ।
तर, परिवारका सदस्यबीचमै कुरा नमिल्दा कांग्रेसको राजनीतिमा कोइराला परिवारको वर्चस्व गुम्दै गएको छ ।
कांग्रेस स्थापनादेखि कोइराला परिवारको वरिपरि घुमेको कांग्रेसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएपछि कोइराला परिवारभन्दा बाहिर गएको छ ।
प्रकाशित मिति : असोज २, २०७८ शनिबार २०:३४:२३, अन्तिम अपडेट : असोज २, २०७८ शनिबार २०:३५:७